Nhau - Bureau Veritas Inoita Gore Negore ISO Ongororo paTongke Flow Fekitori
Shanghai Tongke Flow Technology Co, Ltd. ikambani yepamusoro-soro inotarisa paR & D uye kugadzirwa kwemvura kuendesa uye zvigadzirwa zvine simba-zvinoponesa, uye ukuwo mupi wemagetsi-ekugadzirisa mhinduro dzemabhizinesi. Yakabatana neShanghai Tongji & Nanhui Science Hi-tech Park Co, Ltd, Tongke muridzi wehunyanzvi timu yehunyanzvi. Nesimba rakadai rehunyanzvi Tongke anoramba achitsvaga hunyanzvi uye nekumisikidza nzvimbo mbiri dzekutsvagisa "inonwisa mvura kuendesa" uye "yakakosha mota-yekuchengetedza-kudzora" .Pari zvino Tongke akabudirira kuwana akati wandei anotungamira epamba kubudirira pamwe nekuzvimirira kwehungwaru.
kodzero dzezvivakwa, senge "SPH dzakateedzana dzakakwirira dzinozvigonesa kudzidzisa pombi" uye "simba repamusoro simba rekuchengetedza pombi sisitimu" est.Panguva imwecheteyo Tongke akavandudza tekinoroji yemapombi anopfuura gumi echinyakare senge turbine yakatwasuka, pombi yepasi, yekupedzisira- yekukweva pombi uye multistage centrifugal pombi, zvakanyanya kusimbisa huwandu hwetekinoroji yetsika yechigadzirwa mitsara.
Mafekitori ese akapfuura BV yakasimbiswa ISO 9001: 2015, ISO 14001 yemhando system chitupa uye zvigadzirwa zvepamutemo zvakaendeswa kunze kwenyika dzinopfuura makumi maviri.
ISO 9001 certification inoratidza yedu fekitori kugona kusangana nguva dzose uye kupfuudza zvinotarisirwa nevatengi. Nechikonzero ichi, vatengi vazhinji vanoda kuti vatengesi vave ISO 9001 yakasimbiswa kudzikisa njodzi yavo yekutenga chigadzirwa chisina basa kana sevhisi. Bhizinesi rinowana ISO 9001 chitupa richakwanisa kuwana kuvandudzwa kwakakosha mukushongedzwa kwesangano uye mhando yechigadzirwa nekudzora marara nezvikanganiso, uye kuwedzera kugadzirwa.
Iyo ISO 9001 Quality Management System ndiyo yepasirose inonyanya kufarirwa mhando yekuvandudza, iine anopfuura mamirioni emasangano anozivikanwa munyika zana nemakumi masere pasi rese. Ndiyo chete chiyero mumhuri ye9000 yematanho yakaburitswa neInternational Organisation for Standardization (ISO) iyo inogona kushandiswa nechinangwa chekuenderana kuongorora. ISO 9001 inoshandawo sehwaro hweakawanda akakosha masisitimu akasarudzika, kusanganisira ISO 13485 zviyero zvekurapa), ISO / TS 16949 (mota) uye AS / EN 9100 (aerospace), pamwe neanoshandiswa zvakanyanya manejimendi maitiro senge OHSAS 18001 uye ISO 14001.